Sawirro: Askar ka tirsan xoogga dalka oo lagu dilay qarax ka dhacay Baraawe - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Askar ka tirsan xoogga dalka oo lagu dilay qarax ka dhacay...
Sawirro: Askar ka tirsan xoogga dalka oo lagu dilay qarax ka dhacay Baraawe
Baraawe (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya lagu qarxiyey degaan hoos taga magaalada Baraawe.
Qaraxaas oo ahaa miino oo lagu aasay Bar-control oo ciidamadu ay ku leeyihiin tuulada Ambareeso ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen seddax askari, balse Al-Shabaab oo war ka soo saaray qaraxaan ayaa sheegtay tiro intaas ka badan.
Sidoo kale ugu yaraan laba askari oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxaas, waxaana la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay goobtaas oo ciidanka fariisin u aheed ay ku aastay qaraxa.
Degaanka Ambareeso oo ciidankaan lagu qarxiyey ayaa 5 KM u jira magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Baraawe oo ka mid ah magaalooyin ugu amaanka roon gobolka Shabeellada Hoose, sidoo kalena ah caasimadda maamulka K/Galbeed, waxaa amnigeeda gacanta ku haya ciidan ka tirsan xoogga dalka oo fariisimo ku leh, gudaha iyo daafaha magaalada.
Saraakiisha iyo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka weli war kama soo saarin dhacdadaan, dhankooda Al-Shabaab waxay sheegteen in qaraxaas ay ku dileen todoba askari oo ka tirsanaa militeriga Soomaaliya.
Sawirro laga soo qaaday goobta ciidanka lagu qarxiyey ayaa muujinaya burburka soo gaaray guryo jiingad ah oo bartaas control uga dhisnaa ciidanka.